Afyare Cabdi Cilmi
Professor Maxamed Muunye
Nasiib wanaag, Soomaalidu waxay ka mid noqotay bulshooyinka iyaguna doonaya inay dareenkooda ka muujiyaan goobaha go’aamada waaweyn ee dalkan Canada lagu sameeyo. Professor Maxamed Muunye Qaasim oo wax ka dhiga Seneca College ayaa caddeeyey inuu u tartamayo inuu noqdo musharraxa Xisbiga Liberalka ee xaafadda Etobicoke Center. Xaafaddaas waxaa hore uga soo geli jiray Allan Rock oo ka mid ahaa Golihii Wasiirrada ee Re’iisul-Wasaarihii hore, Jean Chrétien. Allan Rock wuxuu hadda noqday Safiirka Canada u fadhiya Qaramada Midoobay. Professor Muunye waxaa xaafaddaas kula tartamaya 5 qof oo kale.
Inkastoo ay Soomaalidu weli ku cusub tahay Canada, haddana waxay ka mid tahay beelaha ku dadaalaya inay wax la qabsadaan bulsha-weynta kula nool dalkan. Soomaali badan baa wax ka baratay ama weli ka barata jaamacadaha iyo kulleejooyinka dalka. Qaar baa macallimiin ka noqday jaamacadaha waaweyn. Kuwa kale waxay ka furteen ganacsiyo kala duwan, halka qaar kalanena ay ka shaqeystaan. Isku-soo duuboo, waxaa lagu tilmaami karaa dadka Soomaaliyeed dad halgan adag kula jira nolosha iyo xaaladaha ku cusub ee dalkan Canada.
DOORASHADII Canada (Election) iyo Soomaalida: Nov 2003
Meelaha qabyada weyni ka jirtay ama Soomaalida Canada aanay ka muuqan waxa ka mid ah ka qeyb-galka nidaamka siyaasadda ee dalkan Canada. Waa la arki jiray or-orod wata is-khilaaf badan marka ay doorasho timaado iyadoo koox waliba ay taageerayso musharixiintooda.
Hase-yeeshee, doorashooyinkii deegaanka iyo kuwii gobolka Ontario ee sannadkii la soo dhaafay way ka duwanaayeen sidii hore. Waxaa ka muuqday Soomaalida dareen iyo xamaasad ka duwan kuwii hore loogu yiqiin. Soomaalida intooda badan waxay qaateen go’aanno ay ku kala taageerayaan musharrixiintii isa soo taagay. Waxaa abuurmay guddi hawshiisu ay ahayd inay dadka soo saaraan si ay codkooda u dhiibtaan. Nasiib wanaag, laba ka mid ah musharrixiintii ay Soomaalida badankeedu taageereen (Duqa Magaalada iyo Xildhibaanka metala Etobcoke North) way guuleysteen. Waxaa iyaduna isku soo taagay dowladaha hoose dhowr qofood oo Soomaali ah oo ku kala nool magaalooyinka Toronto iyo Ottawa. Nasiib darro, qof Soomaali ah kuma uusan guuleysan tartankaas.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabooyinkaas waxaa ku jiray casharro farabadan. Waxaa la ogaaday in mar walba musharraxa ay Soomaalidu taageertaa uusan wax weyn u qaban. Casharradii laga faa’iiday doorashooyinka la soo dhaafay waxaa ugu muhiimsan in Soomaali badan ay garteen halka ay ka sahlan tahay in is-baddel laga sameeyo. Waxaa kale oo u muuqatay dad badan in nidaamka xisbiyada dalku ay u shaqeeyaan uu yahay qaabka kaliya ee dowladda Gobolka iyo tan dhexe saamayn muuqata loogu yeelan karo.
Isla-doorasho Ilaah iyo nasiib wanaagba ku sheegoo, waxaa dareenkaasi xoogeystay iyada oo wax laga baddelay qaabkii hore ee xubnaha Xisbiga Liberal-ka ee dowladda Federaalka ay wax u dooran jireen. Maaddaama uu xisbigani yahay kan ugu ballaaran xisbiyada, islamarkaasna dalka xukuma, waxaa halkaas uga muuqday bulshooyinka tirada yar oo ay Soomaalidu ka mid tahay fursad ay wakiillo iyaga metala ugu dirsan karaan Baarlamaanka.
Sida uu ku dhawaaqay hoggaamiyaha Xisbiga Liberaalka, ahna Ra’iisul-Wasaaraha dalka Paul Martin, qaabka cusubi wuxuu awoodda oo dhan siinayaa xubnaha xisbiga ee xaafadda ama seejada (waaxda sida Etobicoke Centre). Canada hadda waxaa ka jira 301 seejo ama xaafadood oo ay ka soo galaan 301 xubnood. Wakiilka uga tartamaya xaafad kasta waxaa dooranaya xubnaha xisbiga ee xaafaddaas. Sida badan, tirada xubnaha joogtada ah ee xisbiga Liberalka ee soo xaadira habeenka ay laamaha xisbiga ee xaafaduhu ay dooranayaa qofkii meteli lahaa xisbigooda waxay celcelis ahaan u dhexeeyaan 300 ilaa 400 oo xubnood. Yacni, waxaa laga wadaa xubnaha soo xaadira inay codeeyaan marka xisbigu dooranayo wakiilkiisa.
Tani waxay u fududeynayaa ummadaha tirada yar ee isku xiran inay saamayn weyn ku yeeshaan natiijada doorashada. Tusaale, Beesha Siikha ama Singa-Singaha ee deggan xaafad ka mid magaalada Mississauga waxay ku guuleysteen doorashoyinkii Gobolka Ontario ee kal hore inay saddex qof oo beeshaas ka soo sharraxaan saddexda xisbi ee waaweyn ee dalka. Taas waxaa u suurtageliyey kadib markii ay iyagu u bateen ama qabsadeen xubnihii 3-da xisbi ee xaafaddaas.
Qaabka cusub ee Ra’iisul-Wasaare Martin uu hadda wado wuxuu ku qasbayaa in uu wakiil kasta uu ku soo guuleysto in xubnaha xisbiga ee xaafaddu ay soo doortaan. Wuxuu sheegay inuusan isagu qofna u soo magacaabi doonin xaafadaha (inkasta oo uu sharci ahaan xaq u leeyahay). Taasi waxay keentay in dhammaan beelaha laga tira badan yahay ay is abaabulaan oo ay ka mid noqdaan xisbigan. Tusaale, sida warbaahintu ay qortay, xaafadda Saanich and the Islands oo ka mid ah Gobolka British Columbia waxaa deggen dadweyne ka badan 320,000. Tirada dadka ka soo jeeda Hindida Siikha ah ee xaafaddaas waa ilaa 3500 oo qof. Xubnaha xisbiga Liberalka ee xaafaddaas waa ilaa 1500 oo qof. Inta badan tiradaas waa Siikh, sida uu sheegay madaxa xisbiga ee xaafaddaas. Sidoo kale, waxay wataan oo taageerayaan nin Siikh ah. Haddii cod la qaado waxaa ku guuleysanaya xaafaddaas inuu ka tartamo ninkaas - oo macnaha Xisbiga Liberalka iyo Martinba waa ku qasban yihiin in ay dhaqaalo iyo taageeraba ay siiyaan makii doorashada dowladda dhexe loo dareero dhawr bilood kaddib.
WARARKII HORE EE CANADA
...Ciidamada Canada oo Taariikhda Markii ugu Horeysey Loo Sameeyey Wadaad Islaam ah
...Canada oo Ra'iisul Wasaare Cusub Yeelatay Guji.....
Sawirka Baasaboorka Canada oo Lagu Soo Rogey in aan La Dhoola Cadayn Karin Guji...
Sida aan kor ku sheegay, waxaa xaafadda Etobicoke Center ka tartamaya Professor Maxamed Muunye Qaasim. Walow ay xaafaddan deggen yihiin dad badan oo u janjeera aragtiyada xisbiyada garabka midig (conservative) ay wataan, haddana waxaa deggen dad badan oo ah Liberal iyo kuwo dalka ku cusub oo ay Soomaalida iyo Muslimiin kalaba ka mid yihiin. Marka la fiiriyo tirada yar ee loo baahan yahay si loogu guuleysto tartanka, iyo dadka faraha badan ee taageero laga heli karo, waxaan qabaa in Professor Muunye uu ku guuleysan karo haddii uu taageerada uu u baahan yahay ka helo bulshadiisa. Tan kale, Professor Muunye, ka sokow aqoontiisa iyo kartidiisa, waa nin sumcad wanaagsan ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed. Run ahaantii, waxaan dhihi karaa haddii ay dadka taageeray Professor Muunye ee is-qoray ay sida ay soo baxaan oo yimaaddaan habeenka codeynta, waa uu ku guuleysanayaa tartanka.
Ugu danbeyntii, hamiga siyaasadeed ee Professor Maxamed Muunye wuxuu yididiilo weyn ku beeray aqoonyahanno, waxgarad, odoyaal, dumar iyo dhallinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aan ka labalabayn taageeradiisa. Shaqsi ahaan, waxaan rumeysanahay in Professor Muunye uu ka soo bixi karo xilkaas. Waxaan ku dhiirrigelinayaa dadka Soomaaliyeed iyo bulshada kale ee Xaafaddaasba ee xubnaha ka ah xisbiga inay ku habeenka codeynta oo ah March 6, 2004 ay soo baxaan oo taageeraan Professor Maxamed Muunye Qaasim. Waxaan qabaa in Professor Muunye uu leeyahay aqoon, karti iyo hufnaan uu arrntaas uga soo dhalaali karo.